DAGAAL LAGU HOOBTAY AYAA KA QARAXAY TUULADA MULU EE DEGMADA QABRIBAYAX EE ISMAAMULKA SOMALIDA | Toggaherer's Weblog
Qabribayax 26 March 2009 (THN)
Dagaal lagu hoobtay ayaa markale ka dhacay Tuulada Mulu oo katirsan Degmada Qabribayax.Abaare salaadii subax kadib markii dagaal lagu hoobtay labada dhinacba ka bilawday tuulada , Dagaalkan oo dhexmaray ciidanka sida khaaska u tababaran ee Dawlada Deeganka Somalida iyo kooxda mucaaradka, ayaa sida wararku sheegayaan in dhimashada ciidanka deegaanku uu kor u dhaafayo 17 askari meesha kooxda mucaaradkana laga dilay tiro kor u dhaafaysa 50 ruux.
Dhaawac labada dhinac ayaa sidoo kale aad u tiro badan. Wararka ayaa intaas ku daraya in dadkii rayidka ahaa ay goobta dagaalka ka carareen ka hor inta uusan dagaalkan dhicin sababtuna ahayd shacabka halkaas deganaa ayaa lasocday iskusoo uruursiga labada dhinac sida wararku nagu soo gaadhayaan.
Dhaawaca ciidanka deegaanka ayaa diyaaradaha helicoptarku usoo gurayaan cusbitaalka ciidanka ee kuyaala magaalada Harar.
Dagaalkan ayaa ah dagaalkii labaad ee ka dhaca degmada Qabribayax oo si wayn loogu hoobto.Isku dhaca ciidanka dawlada Ismaamulka Soomalida iyo kooxa mucaaradka ee ka hawlgala deegaanka ayaan u muuqanin mid soo afjarmaya inkasta oo ciidanka deegaanku uu kor u qaaday hawlaha lagu soo afjarayo dhinaca amaan xumida kajirta deegaanka.
Kooxda mucaaradka ee ONLF ayaa u muuqata mid kor u siiqaadaysa kasoohorjeedkeeda militari ciidanka amaanka dawlada Ismaamulka Somalida.
Xuseen Jaamac Duraan (XUSTO)